बस मुनी लुकेर आमा बालाई खोज्दै हिँडेका यि दुई बालकको तस्विर चीनमा भाइरल, यस्तो छ उनीहरुको दर्दनाक कथा – Etajakhabar
बस मुनी लुकेर आमा बालाई खोज्दै हिँडेका यि दुई बालकको तस्विर चीनमा भाइरल, यस्तो छ उनीहरुको दर्दनाक कथा
चीनमा मानिसहरू ती दुई बालबालिकाको तस्बिर देखेर हैरान भइरहेका छन्, जसले एउटा बसको तलतिर सामान राख्न स्थान (अन्डर क्यारिज) मा बसेर ८० किलोमिटरसम्मका यात्रा पूरा गरेका छन् । यी दुवै बालक दक्षिणी गुआङ्सीको एउटा गरिब गाउँका बासिन्दा हुन् । र, उनीहरू आफ्ना आमाबुबासम्म पुग्ने कोसिस गरिरहेका थिए । उनीहरूका आमाबुबा छिमेकको ग्वाङडोङ प्रान्तमा काम गर्छन् ।
२३ नोभेम्बरका दिन यी बालकका शिक्षकले यिनीहरू हराएको उजुरी दर्ता गराएका थिए । सोही दिन यी दुवै बालक एउटा बस स्टेसनमा रोकिएको बसको अन्डर क्यारिजमा भेटिए । तस्बिर र भिडियोमा यी दुवै बालक धुलो र माटोमा लत्पतिएका र बसको तल्लो भागको अन्डर क्यारिजमा निकै जोडसँग समातेर बसेका देखिन्छन् ।
‘आमाबुबाको याद आइरहेको थियो’ यी बालकले करिब ८० किमि लामो यात्रा पूरा गरेका थिए । जुन यात्राको क्रममा बस कैयौँपटक होचो, अग्लो, खाल्टाखुल्टी भएको स्थानबाट पार भएको हुन सक्छ । तैपनि, दुवै बालक सही सलामत भेटिँदा बसका स्टाफ अचम्मित छन् । बसका एक कर्मचारीले बताएका छन्– यी बालक दुब्ला भएकाले बसको अन्डर क्यारिजमा सजिलै घुस्न सफल भए ।
बसका स्टाफका अनुसार यी बालकले त्यति धेरै कुराकानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । तर, एक स्टाफ सदस्यले सदर्न मर्निङ पोस्टलाई बताएका छन्– हामीलाई निकै प्रयासपछि मात्र थाहा भयो कि दुवै बालकलाई आफ्नो आमाबुबाको निकै याद आइरहेको थियो । यी बालक आफ्नै रहरमा बसको तल्लो भागमा लुकेका थिए । उनीहरू कुनै हालतमा आफ्नो आमाबुबाको खोजी गर्न चाहन्थे ।
समाचारअनुसार उनका नातेदारलाई सोही साँझ आएर ती बालकलाई लिएर जान सूचित गरिएको थियो । उनीहरूको तस्बिर चीनमा भाइरल भएको छ । र, मानिसहरूले घटनामाथि दुःख व्यक्त गर्दै यी तस्बिर निकै ठूलो संख्यामा सेयर गरिरहेका छन् । एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्– चीनमा कैयौँ यस्ता बालबालिका छन्, जो निकै कम उमेरमै आफ्ना आमाबुबाबाट अलग हुन बाध्य छन् । आखिर कसले यिनीहरूलाई ध्यान दिइरहेको छ र यसको समाधान कसले खोजिरहेको छ ? एकअर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्– यो समाजको विडम्बना हो ।
ग्रामीण इलाकामा यस्ता कैयौँ बालबालिका छन्, जसका आमाबुबा काम गर्न सहर गएका छन् । कैयौँ बालबालिका आफ्ना हजुरबा, हजुरआमाको साथमा बस्छन् र कहिलेकाहीँ एक्लै पनि । तर, यी दुवै बालक बोर्डिङ स्कुलका छात्रावासमा बस्दै आएका थिए ।
चीनको तीतो सपना यस घटनापछि मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा ‘चाइना ड्रिम’ को सोचको खिल्ली उडाउन थालेका छन् । यो अवधारणा कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको हो, जसलाई २०१३ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रचारित गरेका थिए । यस अवधारणामा कैयौ“ व्यक्तिगत र राष्ट्रिय आदर्श तय गरिएका छन् । यीमध्ये एक हो, ०२० सम्म राष्ट्रिय गरिबी अन्त्य हुनेछ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
सामाजिक सञ्जालका एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्– चीनको उदय प्रवासी मजदुरमाथि निर्भर रहन्छ, जसको मजदुरीमा शोषण गरिन्छ । अर्का प्रयोगकर्ता लेख्छन्– यी दुई ‘बेवकुफ बालक’ का लागि ‘चीनको सपना निकै तीतो भएको छ ।’ उनले अगाडि लेखेका छन्– के चाइना ड्रिम यी बालकको हितमा छैन ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १३, २०७४ समय: ८:४८:५३